Fanamboarana entana an-kalamanjana sy fanatanjahantena |China Outdoor And Sports Items Manufacturers, Suppliers
Ambongadiny famoronana logo manokana kaopy kafe Silicone Aforitra kafe Mug misy sarony ho an'ny campin
SIP, STOW, GO- Nirodana (haavo 2-inch x savaivony 4- inch).Mirodana ho faritra mora diovina ny kaopy fitsangatsanganana kafe izay sady azo antoka ho an'ny fanasana vilia sy ny microwave.
SAFE & MAZAVA: Ny kaopy mirodana dia vita amin'ny silikôma vita amin'ny sakafo sy akora azo averina izay midika fa tsy misy BPA, Phthalates, firaka na lakaoly.
Vokatra vaovao 300ML amidy ambongadiny rano fingotra azo ampiasaina Silicone miforitra kaopy kafe azo collapsible ho an'ny dia an-tokotany
Ny famolavolana satrony azo ovaina dia asiana tombo-kase ho an'ny dia sy fitehirizana rano, ronono, sns, manakana ny tavoahangy tsy hisokatra tsy nahy, Ny tavoahangy dia voaisy tombo-kase ary tsy hivoaka koa.
Manolotra tsiro madio mitovy amin'ny ataon'ireo kaopy fitaratra ireo izahay, saingy miaraka amin'ny tombony fanampiny amin'ny faharetana mahatohitra vakivaky, mahatonga azy ireo ho namana tsara indrindra mba hitoetra ho mamelombelona mandritra ny dia, mitoby, mandeha an-tongotra.Ny endrika mora azo mirodana dia mahatonga azy ho mora entina rehefa mandeha ianao.
Kaopy silikônika azo averina azo afindrafindra ho an'ny ankizy misotro rano
Famolavolana miforitra & azo entina: Ity kaopy 5 ity dia azo aforitra ary mora entina.Azonao atao ny mametraka azy ao anaty kitapo, paosy.Ny endrika collapsible, mety tsara ho an'ny fitsangatsanganana ivelan'ny trano, camping, fitsangatsanganana ary fanatanjahantena.
Mahatohitra hafanana: Ny kaopy mirodana misy sarony dia mahatanty ny mari-pana avy amin'ny- 40℉ hatramin'ny 480℉, mety amin'ny zava-pisotro mangatsiaka na zava-pisotro mafana.Fanasan-damba azo antoka.
Silicone tavoahangy rano no tena vokatra ao amin'ny orinasa.Ny tavoahangy rano sicone dia natao indrindra ho an'ny hetsika ivelan'ny trano.Ny fitaovan'ny tavoahangy rano silikônina dia 100% BPA maimaim-poana sakafo.Ny tavoahangin-drano silikôninay dia tsy misy poizina tanteraka, ary ankatoavin'ny SGS / LFGB / CE.Izy io dia karazana malefaka, tsy misy poizina.
ASA ATAO AN-TOKONY FOLONA KAOPISY MISY SAROTRA:Kaopy miforitra tsy azo vakiana mipoitra ny kaopy kafe, mitsitsy toerana, mora diovina, mpanampy tsara amin'ny dianao ary mandeha amin'ny gilasy.Tonga lafatra amin'ny rano mafana na mangatsiaka, ranom-boankazo na zava-pisotro misy karbona, Mety amin'ny sekoly, fitsangatsanganana, toby, fitsangatsanganana, fihanihana tendrombohitra, fanjonoana, fianihana tendrombohitra ary hetsika ivelan'ny trano sy fampisehoana.
8 mm Loko avana manokana miolikolika Silicone fisotroana mololo Sakafo Bevel Incision Mololo azo ampiasaina
HABE & FLIEXBLITY LEHIBE: Habe tonga lafatra ho an'ny 30 & 20 Oz Yeti / Ozark / Rtic Tumblers.Tsara ho an'ny rano, voasarimakirana, soda na kafe.
SAROTRA AZY ny fanasan-damba fa TSY ampiasaina amin'ny microwave.Mamorona ireto mololo ireto izahay ho an'ny karazana zava-pisotro rehetra - mora ampiasaina na dia ho an'ny zanakao aza - mety amin'ny karazana tumblers ramblers ary mora diovina.Aza hadino ny manasa tsara ireo vokatra alohan'ny fampiasana voalohany.Sasao amin'ny savony fanasan-damba sy rano betsaka amin'ny alalan'ny borosy fanadiovana.
Kojakoja Bar Borosy mololo azo entina sy mololo azo ampiasaina indray
Mahazo aina sy azo antoka hosotroina:Silicone sakafo malefaka sy azo bitina, mahatsapa voajanahary ao am-bava fa henjana ary tsy mora rovitra, mety ho an'ny ankizy na olona maniry mololo malefaka tanteraka.Azo antoka kokoa noho ny mololo metaly/plastika/ vera izy io, tsy hanindrona ny vavanao, ny nify, rehefa mandeha na mitondra fiara ianao.
Ny fanadiovana mora indrindra:Ny borosy fanadiovana roa dia tena mora ampiasaina, izay afaka manadio tsara ny ao anaty mololo.Aorian'ny fanadiovana dia asaina mahandro amin'ny rano mangotraka mandritra ny minitra vitsivitsy na manendasa amin'ny hafanana ambony.
Fomba vaovao 50Ml 70Ml 90Ml Food Grade Silicone Travel Set tavoahangy Kosmetika misy kaopy Suction
Fisokatra malalaka ho an'ny famenoana sy fanadiovana:Tsy toy ny ankamaroan'ny tavoahangy fitsangatsanganana, ity iray ity dia misokatra malalaka dia mahatonga azy io ho mora ny mameno ranon-javatra matevina kokoa, ary mora amin'ny borosy hanadiovana ny ao anaty fantsona.
Valve tsy mitete:Ny saron-tavoahangy dia misy valva tsy mitete izay misoroka ny fivoahana ary manome antoka fa tsy maintsy omenao foana ny fatrany.
Ambongadiny 100Ml kely portable Kean Silicone mahafatifaty leak porofo TSA nankatoavina Silicone Travel tavoahangy napetraka
ambongadiny ambony kalitao fikarakarana manokana sub-tavoahangy shampoo menaka manitra silicone Travel tavoahangy napetraka
Fitaovana Premium & Safe:Ireo tavoahangy fitsangatsanganana silicone ireo dia vita amin'ny silicone BPA-Free food grade, Tena azo antoka sy mety amin'ny fialan-tsasatrao, ary ny fitaovana maivana sy malefaka dia mamela anao hamongotra ny ranon-javatra mora foana.